मेल भर्सनमा आयो ‘तिमी तारे भीर’, यसरी तयार भएको थियो गीत (भिडियोसहित) « Janata Times
खोटाङ, ८ मंसिर । ३२ वर्षअघिको कुरा हो । काठमाडौ‌ रातोपुल छेउमा रहेको पुरानो घरको कोठामा संगीतकार शान्तिराम राई र कवि श्रवण मुकारुङ ‘तिमी तारे भीर’ बोलको गीतमा संगीत भर्न व्यस्त थिए । रातको १ बजिसकेको थियो । रात छिप्पिँदै जाँदा पनि राईको देब्रे पाखुराले पुरानो हारमोनियमको पंखा चलाउन छाडेको थिएन । मुकारुङको हात गिटारबाट हटेको थिएन । ‘तिमी तारे भीर’ गाइरहन्छन् उनीहरू, निथ्रुक्कै भिज्छन् दुईका आँखा तर गीत गाउने धित मर्दैनन् उनीहरूको ।
लगत्तै गायिका पवित्रा सुव्बालाई गाउन दिइयो । गीत स्रोताको मनमुटुमा बस्न सफल भयो । सधै‌ गुनगुनाइहने कालजयी गीत बन्यो । ३२ वर्षपछि उही गीतलाई मेल भर्सनमा गायक रेवत राईको स्वरमा सार्वजनिक गरिएको छ । मेल भर्सनमा आएको त्यही गीतले संगीतकारलाई विगत तीन दशक अडाडि फर्काएको छ ।
‘तिमी तारे भीर’को संगीत भर्नेक्रममा रुवाएको गीत मेल भर्सनमा आएपछि आफूलाई पुनस् रुवाएको संगीतकार राईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
‘हातमा गिटार बजाउँदैछ श्रवण । गल्दै जाने देब्रे पाखुराले पुरानो हारमोनियमको कडा पंखा चलाउँदै हुन्छु म,’ राईले लेखेका छन्, ‘रातको १ बजे निथ्रुक्कै भिज्छ आँखा हाम्रो । र, पनि धितै नमर्ने गरी गाइरहेका हुन्छौँ । रातभरि गाएर नथाक्ने तिमीतारे भीर….। ठीक ३२ वर्षपछि यही गीतले फेरि रुवायो ।’
कवि तथा गीतकार मुकारुङले लेखेको, गायक तथा संगीतकार राईको संगीत रहेको भिडियोसहितको मेल भर्सनमा देवेश राईले संगीत संयोजन गरेका छन् । दर्जनौं चर्चित गीतमा स्वर दिइसकेका खोटाङका गायक रेवतले गाएपछि पुःन ‘तिमी तारे भीर’ले चर्चा पाएको छ । किरण चाम्लिङ राईको निर्देशनमा तयार पारिएको भिडियोमा चर्चित अभिनेता दयाहाङ राई, मिरुना मगर र बाल कलाकार नुमा राईको अभिनय छ । गीतको भिडियोमा मायाँ, प्रेम र मानिसको जीवनमा हुने वियोगान्त क्षणलाई चित्रण गरिएको छ ।
व्यवसायी र आठ लाख श्रमिकको एकै स्वर–‘राती मात्रै कोरोना सर्छ हो ?’
काठमाडौं, ८ माघ । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर रात्रीकालिन व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने सरोकारवाला व्यवसायीहरूले माग
केटीले तपाईलाई मन पराउँछिन् भनेर कसरी थाहा पाउने ?
एजेन्सी । के तपाईंले कहिल्यै महसुस गर्नुभएको छ कि केटीले तपाईंलाई मन पराउँछिन् ? सायद
यसकारण वैवाहिक जीवनबाट अलग्गिए अभिनेता धनुष र ऐश्वर्या
काठमाडौं, ५ माघ । दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष र उनकी श्रीमति ऐश्वर्या रजनीकान्त वैवाहिक जीवनबाट
काठमाडौं, माघ ५ । नायिका श्वेता खड्कालाई कोरोना संक्रमण भएको छ । उहाँले मंगबालर सामाजिक
काठमाडौं, माघ २ । कोभिड(१९ संक्रमित बलिउडकी दिग्गज गायिका लता मंगेशकरको स्वास्थ्य अवस्थामा अझै सुधार
काठमाडौं, माघ २ । कोरोना संक्रमण तीव्र ढंगले फैलिएसँगै सरकारले सिनेमा हल, डान्स बार, जिम
सहवासले जुनसुकै प्राणीको जीवनमा पनि महत्व राख्छ । यौ नलेविना सृष्टि असम्भव छ । यद्यपी